Nubia Red Magic 5G waxay yeelan doontaa xeedho 55W | Androidsis
Way muuqdaan faahfaahinta cusub ee Red Magic 5G ee soo socota, kaas oo ujeedkiisu yahay inuu noqdo casriga casriga ah ee caanka ah ee caanka ah Nubia Technology. Soo saaraha Shiinaha wuxuu doonayaa inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee soo saara qalab leh heerka ugu sarreeya ee soo kabashada ee illaa hadda la heli karo iyo taas oo u dhiganta 144Hz.
Bedelka Nubia Red Magic 3s wuxuu ka gudbay shahaadada 3C ka yimid Shiinaha, taas oo soo jeedinaysa in ay aad ugu dhowdahay in la arko iftiinka waddanka Aasiya. Waxay u muuqataa inay u istaagi doonto wax ka badan shaashadda AMOLED, waxay sidoo kale yeelan doontaa lacag batari deg deg ah oo ay ku qaadato oo haysashada 100% waxay ku suurta geli doontaa wax ka yar 50 daqiiqo.
Sida ku cad dukumiintiga sirta ah, taleefanka ayaa ah nooca NX659J Waana laga gudbay dhammaan tijaabooyinkii ku habboonaa ka hor intaan la tusin, wax ay shirkadaha kale sida caadiga ah sameeyaan. Macluumaadka ayaa sidoo kale soo jeedinaya inuu yahay isku xirnaanta 5G wuxuuna la yimaadaa processor-ka Qualcomm ee 865 GHz 2,84.
Xeedho uu la yimaado waa 55W, wuxuu ku dhex jiri doonaa sanduuqa terminalka, waxaa jira dad badan oo go'aansada inay qaadaan tallaabada qalabaynta si ay ugu hawlgalaan muddo gaaban gudahood. Nubia waxay dooneysaa inay markale soo gasho qeybta taleefanka gacanta oo xoogan lana tartanto calanka kale.
Ku saabsan qaybta shaashadda, Nubia Cas Magic 5G ujeedadiisu tahay inuu noqdo mid ka mid ah kuwa na siin doona waayo-aragnimada ugu fiican ciyaarta, oo bixiya sawiro siman. Intaas waxaa sii dheer, isticmaaluhu wuxuu kala dooran karaa inta udhaxeysa isweydaarsiga kaladuwan, laga soo bilaabo malaha 144Hz ilaa 120, 90 ama ilaa 60.
Oo leh awood kala duwan
El Sixirka Cas 3s soo degay bishii Oktoobar, bilaabida mid kale oo isku mid ah waa dhibic wanaagsan haddii waxa aad rabto ay tahay inaad soo jiidato macaamiil badan. 3-da ayaa rakibay 8 iyo 12 GB oo RAM ah, sidaa darteed waxaan sidoo kale arki doonaa laba qaab oo aan kala dooran karno, mid ka mid ah sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay waa 12 GB.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nubia Red Magic 5G waxay yeelan doontaa xeedho 55W